Xisaabinta ICloud waa marin u helka adeegyada xisaabinta ee intarneedka. Adeegyadan waxay ka kooban yihiin kaabayaasha heerka sare si ay u dhammaystiraan xalalka SaaS (Software as a Service). Bixiyeyaasha adeegga daruurtu waxay ka caawiyaan ganacsiyada inay diiradda saaraan waxqabadyadooda asaasiga ah iyagoo maareynaya dhammaan kaabayaasha kaabayaasha. Maanta, shakhsiyaadka badankood waxay marin u helaan nooc ka mid ah xalka daruuriga sida emaylka, ciyaaraha, filimada, muusikada, sawirrada, dukumiintiyada, adigu magacow. Adeegyada kala duwan ee daruuraha laga heli karo ayaa aad u ballaaran. Xalalka daruuraha ayaa si dhakhso ah u noqonaya xulasho la doorbiday ganacsiyada wax ka qabanaya baahiyaha xisaabinta. Adeeggan wax -ku -oolka ah wuxuu kobciyay xisaabinta daruuraha oo u noqday xalka ugu habboon shirkadaha iyo shaqsiyaadka labadaba.
Xisaabinta daruuriga ah waa mid si aad ah loo qiyaasi karo, la qabsan karo lana maarayn karo. Waxay ka badbaadineysaa shirkadaha maalgashiga kaabayaasha gudaha iyo dib u wareejinta maaliyaddan si loo wanaajiyo loona kobciyo ganacsiyadooda. Xisaabinta daruuriga ah waxay ka caawisaa shirkadaha iyo MNC-yada inay yareeyaan kharashaadka ku baxa maareynta iyo casriyeynta kaabayaashooda hadda jira ee koritaanka iyo horumarka mustaqbalka. Bixiyeyaasha adeegga daruuraha ee waaweyn ayaa bixiya xisaabinta dalabka iyo otomaatiga. Tani waxay awood u siineysaa macaamiisha inay sare u qaadaan ama hoos u dhigaan shuruudaha xisaabinta ay u baahan yihiin. Qaabkan qiimaha-bixinta-sida-aad-u-socotaa wuxuu bixiyaa dabacsanaan ballaaran wuxuuna kaa caawinayaa wax ka qabashada muddada gaaban ee ganacsiyada.